Imizuzu emi-6 yokuzithemba kweConstrucGeek-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Imizuzu ye6 yokuzithemba kweConstGeek
Ndincoma ukuthatha umzuzwana ukwazi le bhulogi, ngoku izayo kunyaka wokusebenza.
Ndiyathetha Ukwakha, imizuzu emithandathu owathembele ukuyisebenzisa ukuze ufunde i-geofumed enye entsha omele uyibeke kule bhulogi.
Kukho kuphela amabini amathuba: ukuba uqaphela ukuba umxholo we-CAD ohambelana nobunjineli awunomdla wakho, okanye ukuba ugqibe ukuwongeza kwiintandokazi zakho.
Ukubonisa iposi ye-6 kwi-AutoCAD yoLuntu lwe-3D
Ukujonga kwi-AutoCAD ye-Civil 3D 2010 - Ukukhula kwindlela yokusebenza
Iingcebiso zokuphucula ukusebenza kwe-AutoCAD Civil 3D
Umqulu wokwenza iqonga nge-AutoCAD Civil 3D
Faka i-AutoCAD okanye i-Civil 3D 2008 kwi-Windows Vista 64bit
Ngokuqhelekileyo ukuvelisa i-polyline esuka kwi-Microsoft Excel idatha
Ixesha eliqhelekileyo elithatha imvulophu ebanzi yendlela eyodwa
jose leon meadow meadow uthi:
Kulungile kusasa, le nkqubo ilungileyo kwaye sifanele senze ukuba ufuna ukuhamba phambili. ukuziqhelanisa, kunye nezinye iinkqubo endincomayo kubo bonke abaqeqeshiweyo kwintsimi yokonga
Ngaba i-pbliose ingafikelela / ikhuphele amaxwebhu ale ntetho "ukuphunyezwa kwesiseko se-IDE node nesoftware yasimahla" kwinto esingakhange sikwazi ukuyilandela? Umbuliso
Akukho sidingo sokubonga, silapha ukusebenzisana. Ukubulisa
Mario Torres uthi:
Sawubona G!, Siyabonga ngale nqaku, namhlanje, isikhala phakathi kobunjineli kunye ne-CAD sisondela kwaye sisondele, kwaye ke, yiyiphi into ekhethekileyo engayisebenzisi isayilesi njengesixhobo sokuphumeza iziphumo?
Ngokomzekelo, yintoni i-dentist engabandakanyeki ekusebenziseni isofthiwe yakho ye-denture? okanye mhlawumbi uqoqosho kunye neenkqubo ezithile zezoqoqosho.
Siyabulela kule nto sisebenza kakuhle, ekubeni sisebenzisa i-CAD ukuya phezulu ukuba siphumelele iziphumo kunye nexesha elifutshane kakhulu.
Ngombulelo kwiiblogi kunye neifom ze-intanethi, esi sixhobo siyeke ukungaziwa kubantu bonke, ngoko ukwabelana ngolwazi, konke okwenzayo kushiya loo mvakalelo yokushiya intlabathi encinane kwentlabathi kule yolwandle enkulu yolwazi.
Ukubulisa kunye nokuvuyiswa kweblogi yakho.
AutoCAD kunye ne-25 iminyaka